Masilwe nokuxhashazwa kwabasebenzi kumanyuvesi - Amanda.mobi Setswana
Iningi yamanyuvesi eMzansi isaqhubeka nokuxhaphaza iphinde idicelele phansi isithunzi sabazali bethu ngokubaholela kancane. Njengendlela yokunciphisa izindleko, amanyuvesi amaningi aqasha ngaphandle kunokuba kuqashwe noma kusetshenziswe abasebenzi abakulezi zikhungo, okuholela ukuthi imiholo yabasebenzi bahole kancane baphinde bangabi nenzuzo, phecelezi, izinto ezifana nempesheni. Kwezinye izigameko lokhu kuholela ekulahlekelweni imisebenzi kubantu abasebenza njengonogada, abasebenza kwezenhlanzeko, abasebenza emakhishini, abasebenza kwezokuthutha, kanye nabasebenza ezingadini.
Abasebenzi abasebenzela abaqashi abangasiyo ingxenye yamanyuvesi baphinde baholelwae kancane futhi. Abafundi abathanda intuthuko, izinhlangano zabasebenzi, kanye nenhlangano ye-Rhodes Must Fall bafuna ukuthi abasebenzi baqashwe ngokugcwele ngamanyuvesi futhi baphinde baholelwe imiholo ehloniphekile. Kuyakhathaza ukuthi amanyuvesi axhaswa yizimali eziphuma kuhulumeni asaqhubeka ngokubambelela emazingeni emiholo andisa ububha.
Zinhloko zezikhungo zemfundo ephakeme, malunga ezigungu, baxhasi kanye nomabhalane bamanyuvesi:
Njengezikhungo zomphakathi, amanyuvesi anesibophezelo sokuthi abambe indima ekulweni nokuxhashazwa okwenzeka emiphakathini. Lezi zikhungo kufanele zidlale indawo ekuholeni ekufundiseni abafundi kwezobuhlanga, kwezobulili, kwezokulingana, kanye nezinye izindawo eziphathelene nezinhlobo zengcindezi. Ukuqhubeka kwalesi simo sokuthi amanyuvesi aqhubeke nalomkhuba wokuqasha ngaphandle, imizamo yokushintsha izikhungo zemfundo ephakeme iyize. Kubalulekile ukuthi siqonde ukuthi abantu kanye nezimo zabo empilweni zisabalulwa ngobuhlanga, ingcindezi yeminyaka, kanye nobulili babo. Ngenxa yalokhu, izinkinga zabasebenzi kufanele kube yizo ezihola umzabalazo wokuqeda ingcindezi ezikhungweni zethu.
Ukuqeda ingcindezi kubandakanya ukuqedwa kokuqasha ngaphandle, ukuhlukunyezwa, kanye nokuholelwa imiholo ehloniphekile. Ngakho ke, sifuna ukuthi ukuqasha ngaphakathi kube isibophezelo esithathwa njengesimo esiphuthumayo ukuze sifinyelele esimweni lapho amanyuvesi eqhashambisa ubu-Afrika.
Rhodes Must Fall; Left Students’ Forum; UCT NEHAWU, October6 Wits, October6 University of Johannesburg and the Black Students Movement at the university currently known as 'Rhodes'.